I RAVONINJATOVO - Ny Fahazazany
Tokony ho teraka tamin'ny taona 1870 i Ravoninjatovo raha ny taona no jerena. Araka ny voalaza teo aloha dia Maharitra no anarany fony kely, fa lasa Ravoninjatovo tato aoriana ary misy fanampiny Louis tamin’ny bokiny anankiray.
Nisy fotoana nanerena ny zana-bahoaka tsy maintsy mianatra. Nampandosirana tany Fozehana (Mandiavato) any amin’ny anadahin-dreniny Ravoninjatovo. Ranjanahary kosa nianatra. Nangingina ny fampidirana mpianatra dia nody izy. Rehefa nihetsika indray dia lasa nianavaratra izy, dia toy izany hatrany. Nihetsika ny fampidirana mpianatra tany Mandiavato. Tsy misy hevitra intsony, fa dia tsy maintsy mianatra Ravoninjatvo.
Tena kinga saina Ravoninjatovo. Rehefa hiditra hianatra izy dia Ranjanahary anabaviny no nampianatra azy, ka nahagaga fa indray andro monja, dia nahavaky teny izy. Anisan’ny tena nahay izy teny ampianarana ary anisan’ny nalefan'ny misionera hianatra any Ambohijatovo Atsimo (Antananarivo) tao amin’ny sekolin’ny 40 lahy.